Ny lisitry ny teny farany Rurouni Kenshin ho an'ireo mpankafy Anime - Hafa
Ny lisitry ny teny farany Rurouni Kenshin ho an'ireo mpankafy Anime
Teny nalaina tamin'ny toetra amam-panahy Anime voalaza ato
Rurouni Kenshin manaraka samurai iray misy rà eny an-tànany tamin'ny fiainany taloha.
Ankehitriny dia manandrana mandeha amin'ny lalana madio tsy misy ra mandriaka izy, amin'ny alàlan'ny faran'ny farany amin'ny lelany mba tsy hamonoana ny hafa amin'ny ady.
Io vesatra mavesatra io no mampirongatra ny fihetseham-po, teny nalaina ary misy fankahalana mihitsy aza eo amin'ireo mpilalao sarimihetsika. Ataovy iray ity lalina ity ary manana fahatakarana lalindalina kokoa.
Ireto misy teny nalaina tsara indrindra avy amin'ny andiany anime.
Teny nindramina Rurouni Kenshin tsara indrindra:
1. Fanononana Kaoru Kamiya
'Samy manana ny lasa tiany hamafana ny tsirairay.' - Kaoru Kamiya
'Ny sabatra dia fitaovana iray hamonjeny ny olona.' - Kaoru Kamiya
“Ratsy? Fantatro fa antsoin'izy ireo hoe The Rose of Martial Arts eto aho! ' - Kaoru Kamiya
2. Enishi Yukishiro Quotes
'Ny sorompanavotana tokana izay ho tsapanao dia ny fahafatesanao manokana. Hasazy ara-drariny sy henjana ianao, alohan'ny hahitanao ny fiadananao katsahin'i Kenshin. Izany no dikan'ny 'Jinchū'. Izay velona dia tsy maintsy mihetsika manolo ny maty. ' - Enishi Yukishiro
3. Nenji Kashiwazaki Quotes
'Raha mandinika ny androm-piainan'ny lehilahy iray ianao, dia ho hitanao fa feno fifanoherana izany.' - Nenji Kashiwazaki
“Iza no milatsaka miankina amin'ny olona tanteraka. Raha misy olona zato dia misy fomba fitiavany zato… Tsy misy endrika fitiavana tanteraka mihitsy. ” - Nenji Kashiwazaki
4. Kenshin Himura Quotes
“Ho tsapanao fotsiny fa tena tia olona ianao raha efa nampijaly anao tokoa izy ireo. Ny fahavalonao dia tsy afaka mandratra anao amin'ny fomba mety ny olon-tianao. Ny olona akaiky ny fonao no afaka manome anao ny ratra manindrona indrindra. Ny fitiavana dia sabatra roa lela, afaka manasitrana ny ratra haingana kokoa izy io, na mety milentika kokoa ilay lelany. ” - Kenshin Himura
“Niady ho an'ny filamatra tamin'ny sabatra izahay avy eo. Tsy natao ho an'ny fahefana na ho an'ny voninahitra izany, fa mba hamoronana tontolo milamina izay ahafahan'ny olona miaina tsy misy tahotra. Ary raha tokony hanadino izany ianao, inona no niadiantsika tamin'ny revolisiona? ” - Kenshin Himura
'Tsy tokony hanome tsiny ny tenantsika isika amin'ny zava-dratsy nitranga tamintsika. Indraindray, na inona na inona ataontsika, dia iharan'izany isika. ” - Kenshin Himura
“Rehefa mamono olona iray dia teraka ny lolom-po. Io lolom-po io dia mahatonga ny olona hamono indray. Mba hialana amin'izany tsingerina ratsy izany - izany no tanjon'ity sabatra tsy mahafaty ity. ” - Kenshin Himura
'Raha milaza aminao ny marina, dia aleoko lavitra ny resaka mamy sy tsy manan-tsiny ataon'i Miss Kaoru toy izay ny marina!' - Kenshin Himura
“Tiako ho azonao ny zavatra iray. Raha tokony ho resy ianao dia tsy ny hoavinao ihany no hifarana fa ny hoavin'ilay ezahinao harovana ihany koa. Ny safidy dia tsy safidy ho an'ny sabatra miaro ny hafa. Tokony hotehirizinao ao am-ponao izany eritreritra izany. ” - Kenshin Himura
anime slice of life amin'ny hulu
'Ny maty tsy maniry hamaly faty, fa ny fahasambaran'ny velona.' - Kenshin Himura
'Ny fotoana ahitanao ny fahasahianana hahafoy ny ainao ho an'ny olona iray, dia amin'izay fotoana hahatakaranao ny fitiavana.' - Kenshin Himura
“Malahelo ve ianao noho ny tsy fahampian'ny herinao, ry tanora?” - Kenshin Himura
'Izay very anao dia ho hitanao indray, fa izay narianao dia tsy ho azonao intsony.' - Kenshin Himura
'Mety ho faty ianao amin'ny fotoana rehetra, fa ny fiainana kosa mila tena herim-po.' - Kenshin Himiura
'Ny vanim-potoana vaovao dia tsy tonga noho ny sabatra, fa ny olona mampiasa azy no namorona azy.' - Kenshin Himura
“Ny fery tamin'ny lasa no hamaritra ny hoaviko!” - Kenshin Himura
silaka hatsikana fiainana tsara indrindra
“Ny fanampiana olon-kafa no fomba tsara indrindra hanonerana ny lesoka nataonao.” - Kenshin Himura
'Ny fanekena ny tanjaky ny tena sy ny tanjaky ny hafa dia toetra manandanja amin'ny maha-sabatra.' - Kenshin Himura
“Fony velona teo am-piandrasana ny fiainana sy ny fahafatesana aho dia nampiasa ny sitra-poko rehetra mba ho velona. Nahazo hery hafa noho ny fahafoizan-tena aho ary nahafehy teknika farany iray. Ny finiavana hiaina dia matanjaka noho ny zavatra hafa rehetra. Izany no tara-pahazavana natahoran'ny tompoko ny ainy mba hanehoany ahy. Amin'ny maha Hitokiri Battousai ahy dia nanao heloka bevava marobe aho ka tsy afaka nibebaka tamin'izy ireo aho. Izany no antony ninoako an-tsokosoko fa tsy maninona izany rehefa maty na novonoina aho. Na izany aza, ankehitriny… na dia voasazy ara-dalàna na voafehy aza aho. Tsy ho very maina ny faniriako hiaina. ” - Kenshin Himura
“Raha toa ka afaka manome antsika ny fahamarinana ny ady dia tsy misy olona hanao fahadisoana amin'ny fiainany. Tsy mora toy izany ny fiainan'ny olona iray. Ny fahamarinana tsy maintsy ianaranao avy amin'ny tenanao, amin'ny fomba fiainanao. ' - Kenshin Himura
'Izay tena mahasoa ny olona iray dia tsy azo aseho amin'ny teny, fa tsy afaka. Ny tena zava-dehibe dia ny fahatsapana fahatokisana rehefa avy nandany fotoana niaraka taminy. ” - Kenshin Himura
“Angamba ny faritra lavitra amin'ny lanitra dia toa mazava kokoa, ka hiezaka hatrany isika hahatratra azy.” - Kenshin Himura
“Mino ianao fa misy ny matanjaka hamongorana ny osa. Ampiasaina ho sakafo. Diso hevitra ianao… Misy ny matanjaka, tsy hanome sakafo ny osa, fa hiaro azy ireo! ” - Kenshin Himura
5. Seijuro Hiko Quotes
“Voninkazo Cherry amin'ny lohataona. Ny kintana dia manarona ny lanitra amin'ny fahavaratra. Mamirapiratra amin'ny Volana fararano ny volana feno ary amin'ny ririnina, manarona ny tany ny lanezy. Ireo rehetra ireo dia mahatonga ny sake ho tsara. Raha ratsy ny tsirony, dia satria misy zavatra tsy mety ao aminao. ' - Seijuro Hiko
“Nitsatoka tamin'ity tontolo marary ity ny volana. Tsy misy fanasitranana ny aretina. Ny hazakazaka iray manontolo dia latsaka ao anaty fandringanana tsy misy saina. Na ny lehilahy mahery vaika aza mety tsy hahasakana ny tsy azo ihodivirana. Tsy mampihorohoro ny lehilahy intsony ny fahafatesana. Ny fofon-dra dia mahazatra toy ny fofon'ny plum fotsy, noho izany dia mamorona fanandevozana sy lozabe izay mihoatra ny horohoro maty izy. Ireo dia azo iadiana amin'ny fandatsahan-dra bebe kokoa ihany ary ny tsingerina dia tsy mifarana. Ny sabatako dia tarihin'ilay fanjohian-kevitr'i Hiten Mitsurugi, fa rehefa voalaza daholo, ny sabatra dia fitaovana iray hanimbana fa tsy famonjena. Ny fomba tokana ahafahako mitazona ny maha-olombelona ahy dia ny fandevenana ireo niharan'izany. ” - Seijuro Hiko
“Ny famonoana olona no zavakanto tokana mety ampiharin'ny mpanao sabatra. Tsy misy teny haingo afaka manova izany. Te hiaro olona amin'ny famonoana olona ve ianao? Hamono legiona ianao mba hisy vitsivitsy velona. Taona maro, talohan'ny nahaterahanao, ny sabatro dia nandriatra ny ain'ny olona. Eny, olon-dratsy daholo ireo lehilahy ireo, saingy olombelona voalohany indrindra izy ireo, Kenshin. Izao tontolo izao izay irinao fatratra hiditra dia tsy hahalala izay hatao aminao. Hamitaka anao amin'ny finoana fa mamonjy aina ianao na dia manimba azy ireo aza. Hanaiky ireo lainga ireo ianao mandritra ny fotoana rehetra, dia ho voaloton'ny fandikan-dalàna ratsy indrindra ny tananao. ” - Seijuro Hiko
“Tsy dia tsotra loatra ity vanim-potoana ity ka azonao apetraka amin'ny soroka ny zava-drehetra ary ho sorona tokana ianao. Ary, miaraka amin'izay, ny fahasambaran'ny olona iray dia tsy tsotra ihany koa. Raha tokony hianjera ianao ho sorona, tovovavy iray tonga tany Kyoto niaraka tamin'ny faniriana hahita anao no hiatrika fahantrana. Tsarovy izany. Na matanjaka toy inona aza ianao dia olombelona ihany. Tsy mila ianao na ho lasa Bouddha, na mpamono olona. ” - Seijuro Hiko
'Rehefa manana fahefana ianao, indraindray dia apetraka amin'ny toe-javatra iray izay mahatonga anao hitondra enta-mavesatra fanampiny, ary miaina amin'ny fanaintainana mandritra ny fiainanao rehetra.' - Seijuro Hiko
“Na mafy toy inona aza ny olona, ​​tsy misy mahasakana ny fizotry ny fotoana.” - Seijuro Hiko
“Na manao ahoana na manao ahoana ratra ao anatiny, tsy afaka miverina intsony ny maty.” - Seijuro Hiko
anime isa 1 amin'ny fotoana rehetra
“Hadalana ny mihaino izay tsy mety mihaino anao. Ataovy araka izay itiavanao azy. ” - Seijuro Hiko
6. Anji Yukyuzan Quotes
“Tsy dia tsotra loatra izao tontolo izao. Tsy afaka mamonjy olona amin'ny hatsaram-panahy fotsiny ianao. ' - Anji Yukyuzan
7. Sanosuke Sagara Quotes
“Eny, mino aho fa manao zavatra adala daholo ireo izay mifankatia.” - Sanosuke Sagara
'Hey, hampahafantariko anao fa saika tena nandaka ilay siny aho nandritra io fampiofanana io, koa aza sahy mamintina izany amin'ny teny iray ianao, na dia tsara toa ny' mety 'aza izany.' - Sanosuke Sagara
8. Hajime Saito Quote
“Afaka mampiofana alika amin'ny sakafo ianao. Afaka mividy olona amin'ny vola ianao. Saingy tsy misy lehilahy velona afaka mitaona ny amboadia any Mibu! Tsy hiova mihitsy ny zavatra sasany. Ny amboadia dia ho amboadia foana. ” - Hajime Saito
'Heveriko fa efa nahita tamin'ny fonao izy, ary milalao adala fotsiny hampiasa anao. Miantso ny tadin'ny reharehanao mora vidy ianao ary mandihy toy ny marionette kely. ” - Hajime Saito
'Aleo lazaina fotsiny ... izay ahy, ary izay anao… ahy koa.' - Hajime Saito
'Ny lehilahy izay tsy mahazaka ny finoany dia mampalahelo, maty na velona ihany.' - Hajime Saito
9. Makoto Shishio Quote
“Raha ara-dalàna isika dia mety tsy velona intsony ankehitriny. Ary izany ry namako no manome antsika ny sisiny ilaintsika. ” - Makoto Shishio
“Eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny malemy no fihinan'ny mahery. Velona ny mahery, maty ny osa. ” - Makoto Shishio
10. Seta Sojiro Quote
“Amin'ny farany, ny tsara indrindra ihany no velona eto amin'ity tontolo ity. Raha matanjaka ianao dia velona, ​​raha malemy ianao dia maty. ' - Seta Sojiro
“Rehefa manandrana manangana trano vita tsy namboarina ianao dia tokony horavana aloha.” - Seta Sojiro
11. Raijuta Isurugi Quotes
“Aoka hisy fitahiana ho an'ny fanjakan'ny faniriana.” - Raijuta Isurugi
12. Jinei Udo Quotes
“Ny mpamono olona dia mpamono olona mandra-pahafatiny. Tsy mety ho zavatra hafa mihitsy izy. ” - Jinei Udo
Fizarana Anime Anime 22 avy amin'ny andiany taloha: Samurai Champloo!
100+ amin'ireo teny Naruto lehibe indrindra ho an'ireo mpankafy Anime Shounen
maninona no lafo be ny sary pvc
anime tsara indrindra amin'ny laharam-potoana rehetra
faran'ny anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra